ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ အခက်အခဲတွေကြားက အောင်သပြေသပိတ်မှာ တက်ကြစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ ဘုန်းဆက်သွင်….. – Cele Snap
မင်္ဂလာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဘုန်းဆက်သွင်ကတော့ အနုပညာလောကမှာ ဇာတ်လမ်းတွဲပေါင်းများစွာကိုရိုက်ကူးထားပြီးအောင်မြင်နေတဲ့အပြင် အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့အတူတစ်သားထဲရပ်တည်နေတာပဲဖြစ်ပါတဆယ်နော်။နွေဦးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကြီးမှာ အရေးတော်ပုံအောင်မြင်ဖို့ အတွက် လမ်းပေါ်ထွက်လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေအပြင် အလှူအတန်းတွေ မှာလည်း ပြုလုပ်ပြီး လုအင်အား ငွေအင်အားတွေနဲ့ပါ အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။
ဘုန်းဆက်သွင်ဟာဆိုရင် တက်ကြွရဲရင့်စွာနဲ့ တတ်နိုင်သလောက် အားဖြည့်ပါဝင်နေတဲ့ ဘုန်းဆက်သွင် ကတော့ ဒီကနေ့မှာလည်း ပြည်သူတွေနဲ့အတူ အောင်အတိတ်အောင်နိမိတ်တွေ အဖြစ် အောင်သပြေသပိတ်ကိုလည်း ပြုလုပ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်..။ဖြိုခွင်းမှုတွေရှိနေတဲ့ အခက်အခဲတွေကြားထဲက ယနေ့အချိန်ထိ သွေးမအေးသွားဘဲ လုပ်နိုင်သလောက် အင်အားတွေနဲ့ အကောင်းဆုံးကြိုးစား လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဘုန်းဆက်သွင်ကတော့ မနက်အစောပိုင်းက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ကိုလည်း ဝေမျှထားပါသေးတယ်..။
“ယနေ့ (11.4.2021)အောင်အတိတ်အောင်နိမိတ်နဲ့အောင်သပြေသပိတ်အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်💪💪💪..” ဆိုပြီး လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကို ဝေမျှထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲကြီးမှာ ယနေ့အချိန်ထိ အားမာန်တွေအပြည့်နဲ့ တက်တက်ကြွကြွပါဝင် လုပ်ဆောင်နေတဲ့ မင်းသား ဘုန်းဆက်သွင်ရဲ့ စိတ်ထားနဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေ ကိုတော့ ပရိသတ်တွေကချီးကျူးရင်း အားပေးစကား တွေလည်း ပြောထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်..။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်…။
မင်ျဂလာပါ ပရိတျသတျကွီးရေ…. ပွညျသူခဈြအနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ ဘုနျးဆကျသှငျကတော့ အနုပညာလောကမှာ ဇာတျလမျးတှဲပေါငျးမြားစှာကိုရိုကျကူးထားပွီးအောငျမွငျနတေဲ့အပွငျ အခုလကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ အခွအေနတှေနေဲ့ ပတျသကျပွီး ပွညျသူလူထုနဲ့အတူတဈသားထဲရပျတညျနတောပဲဖွဈပါတဆယျနျော။နှဦေးတျောလှနျရေးတိုကျပှဲကွီးမှာ အရေးတျောပုံအောငျမွငျဖို့ အတှကျ လမျးပျေါထှကျလူထု လှုပျရှားမှုတှအေပွငျ အလှူအတနျးတှေ မှာလညျး ပွုလုပျပွီး လုအငျအား ငှအေငျအားတှနေဲ့ပါ အငျတိုကျအားတိုကျ ပါဝငျလုပျဆောငျနသေူလညျး ဖွဈပါတယျ..။
ဘုနျးဆကျသှငျဟာဆိုရငျ တကျကွှရဲရငျ့စှာနဲ့ တတျနိုငျသလောကျ အားဖွညျ့ပါဝငျနတေဲ့ ဘုနျးဆကျသှငျ ကတော့ ဒီကနမှေ့ာလညျး ပွညျသူတှနေဲ့အတူ အောငျအတိတျအောငျနိမိတျတှေ အဖွဈ အောငျသပွသေပိတျကိုလညျး ပွုလုပျနတော တှရေ့ပါတယျ..။ဖွိုခှငျးမှုတှရှေိနတေဲ့ အခကျအခဲတှကွေားထဲက ယနအေ့ခြိနျထိ သှေးမအေးသှားဘဲ လုပျနိုငျသလောကျ အငျအားတှနေဲ့ အကောငျးဆုံးကွိုးစား လုပျဆောငျနတေဲ့ ဘုနျးဆကျသှငျကတော့ မနကျအစောပိုငျးက ပွုလုပျခဲ့တဲ့ လှုပျရှားမှုတှေ ကိုလညျး ဝမြှေထားပါသေးတယျ..။
“ယနေ့ (11.4.2021)အောငျအတိတျအောငျနိမိတျနဲ့အောငျသပွသေပိတျအရေးတျောပုံ အောငျရမညျ💪💪💪..” ဆိုပွီး လှုပျရှားမှုပုံရိပျတှကေို ဝမြှေထားတာ ဖွဈပါတယျ..။တျောလှနျရေး တိုကျပှဲကွီးမှာ ယနအေ့ခြိနျထိ အားမာနျတှအေပွညျ့နဲ့ တကျတကျကွှကွှပါဝငျ လုပျဆောငျနတေဲ့ မငျးသား ဘုနျးဆကျသှငျရဲ့ စိတျထားနဲ့ လှုပျရှားမှုပုံရိပျတှေ ကိုတော့ ပရိသတျတှကေခြီးကြူးရငျး အားပေးစကား တှလေညျး ပွောထားကွတာ တှရေ့ပါတယျ..။ဖတျရှုပေးတဲ့ပရိတျသတျကွီးကိုအထူးပဲကြေးဇူးတငျရှိပါတယျနျော…။
အနုပညာလောကသားထဲက စီနီယာအစ်ကိုအစ်မများဆီကို သွားရောက်ကာ လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ နေဒွေး…..